ဆယ်တန်းအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ညီလေး ညီမလေးတွေအနေနဲ့ Goals/Careers တွေအတွက် ဘာတွေကြိုပြင်ဆင်သင့်လဲ? - JobExpress Myanmar
ဆယ်တန်းအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ညီလေး ညီမလေးတွေအနေနဲ့ Goals/Careers တွေအတွက် ဘာတွေကြိုပြင်ဆင်သင့်လဲ?
လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသောကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်၁၀တန်းအောင်စာရင်းကိုနောက်ကျမှသိခဲ့ကြတယ်။ အောင်မြင်သွားတဲ့ ညီလေး ညီမလေးတွေ အနေနဲ့ ကိုယ့် Career အတွက် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားသင့်လဲ။ဘယ်လို GOAL တွေထားသင့်လဲ ဆိုတာ သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အောင်မြင်မှုရရှိဖို့ လူတစ်ယောက်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနှင့်ဇွဲရှိမှုသာလိုအပ်ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်လူငယ်တော်တော်များများကPreparationအားနည်းတတ်ကြပါတယ်။ ညီလေး ညီမလေးတို့ကို တကယ်သိစေချင်တာက Preparation လုပ်ခြင်းကလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးအထောက်အကူပေးသလဲ။
(၁) ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်သင့်တာကိုကွဲကွဲပြားပြားသိခြင်း(Prioritize your tasks )
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ကိုယ်ဘာဝါသနာ ပါလဲဆိုတာအရင်သိအောင်လုပ်ပါ။ မြန်မာလူမျိူးတို့ရဲ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရလူငယ်အများစုကကိုယ့်မိဘဖြစ်စေချင်သောလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်တတ်ကြတယ်။တကယ်က မိမိလုပ်ချင်‌တဲ့အရာကိုသာဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခြင်းဟာအရေးကြီးဆုံးပါပဲ‌။ ကိုယ်က ဘယ်လို Career မျိူးကို လျှောက်လှမ်း ချင်လဲဆိုတာ မိဘ တွေ ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆို တိုင်ပင်ပါ။ သူငယ်ချင်းက Computer University တက်လို့ ငါလည်း လိုက်တက်မယ်ဆိုတာမျိူးလည်းမလုပ်ပါနဲ့။ တကယ်က ကိုယ်ဝါသနာပါရာကိုသာဦးစားပေးလျှောက်လှမ်ခြင်းကအရေးကြီးဆုံးပါပဲ‌။
(၂) ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း ( Preparation Time )
လူငယ်အများစုကအားလပ်ချိန်တော်တော်များများကို Social media ၊ game တွေပေါ်မှာအများဆုံးကုန်ဆုံးတတ်ကြပါတယ်။ညီလေး ညီမလေးတို့ရဲ့ အားလပ်ချိန်‌တွေကိုအလကားမဖြစ်စေဘဲ မိမိအတွက်အကျိုးရှိမယ့် အရာမျိုးကိုပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ကျောင်းတွေပြန်မဖွင့်ခင်မှာ မိမိဝါသနာပါတဲ့အားကစား၊ကိုယ်ရွေးချယ်မယ့် Career အတွက်လိုအပ်တဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုစတာတွေကိုပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
ကိုယ့် Career အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေမယ့် သင်တန်းမျိုး တက်တာမျိူးဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့် Career အတွက် အသုံးဝင်မယ့် စာ တွေဖတ်တာမျိူး လုပ်သင့်ပါတယ်။
သင်တန်းလဲတတ်ချင်တယ်၊Covidကြောင့်အပြင်ထွက်ရမှာလဲစိုးရိမ်နေတဲ့သူများအတွက်လည်းOnline Learning Classတွေလည်းယခုချိန်မှာသင်ကြားပြသနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ညီလေး ညီမလေးတို့အနေ နဲ့ Online ကို အကျိူးရှိရှိအသုံးချပြီး မိမိ Career အတွက် အသုံးဝင်မယ့် စာတွေ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ Career တစ်ခု ရဖို့အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းဟာလည်း အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) Goals နဲ့ Direction ကိုက်ညီမှုရှိခြင်း( link your actions to your goals)
ကိုယ်ပြုမှုနေတဲ့အရာနဲ့ ကိုယ်သွားချင်တဲ့ goal နဲ့ဆက်စပ်မှုရှိခြင်းကအရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုက်ညီမှုရှိခြင်းဆိုတာက ကိုယ်သွားနေတဲ့ directions က ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ career ဘက်ကိုဦးတည်နေရဲ့လားဆိုတာကို ပြန်စမ်းစစ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှလိုအပ်ချက်တွေကို အချိန်မီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး လမ်းကြောင်းမှန်တစ်ခုပေါ်သို့ရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ပြင်ဆင်ခြင်းက ပိုမိုတိုးတက်စေခြင်းရဲ့သော့ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်မှာ အချ်လေး တွေကို လေ့လာဆန်းစစ်ပြီး မိမိရဲ့ဘဝ မှာ အောင်မြင်တဲ့ Career တစ်ခု ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ
Interviewမှာ "လုံးဝ" မမေးသင့်တဲ့ မေးခွန်း (၅) ခု